M/weyne Soomaali State oo si deg deg ah ugu dhoofay Addis Ababa, Meydka 45 Askari oo la helay & Tigree weerar soo qaaday..
JIGJIGA(P-TIMES)- Madaxwaynaha dawlad deegaanka Soomaaliya Mustafa Maxamed Cumar, oo duhurnimadii maanta soo gaaray Jigjiga ayaa isla galabta u anbabaxay Caasimada Itoobiya ee Addis Ababa, ka dib weeraro xoog leh oo ay maleeshiyaadka Canfartu kusoo qaadeen dhulka Soomaalida kuwaas oo geystay dhimashada in ka badan 100 qof oo u badan ciidamadii duulaanka ahaa.
Soomaali State ayaa wararku sheegayaan in ay rumeysan tahay in ay weeraradan ahaayeen kuwa ay iska kaashanayaan Maleeshiyaadka Canfarta iyo Xisbiga TPLF ee dalka Itoobiya, gaar ahaana Tigreega oo ay ku doonayaan in ay nabadgalyo darro markale abuuraan.
Dagaaladii ugu cuslaa ayaa ka dhacay deegaanka Gobalka Sitti ee gobalka Soomaalida Itoobiya, waxaana weeraradaas soo qaaday ciidamada Ismaamulka Canfarta, waxaana dhimashadooda ay kaga carareen goobaha dagaalka.
Madaxweynaha Dawlad deegaanka ayaa safarkiisan deg deg ah la kulmaya Madaxda Itoobiya oo uu kala hadlay qorshahan cusub ee duulaanka iyo isku dirka labada shacab oo ay gadaal ka riixayaan haraadiga maamulkii TPLF, waxaana wararku sheegayaan in ay dhici doonaan Isbedelo deg deg ah.
Dhanka kale waxaa Xoola dhaqatada Soomaalida ee dhulkooda ilaashanaya ay galabta wareejiyeen 45 ka mid ah maydadkii Ciidamadii Canfarta ee ku soo duulay ee ku dhintay iska hor imaadyadii ay shacabku isku difaacayeen.
Maydadkaa la wareejiyay oo ahaa kuwo ay ka carareen Xulafadii Canfarta & Tigreega, ayaa waxaa lagu wareejiyay Ciidamada Gaashaandhiga oo maanta gaadhay goobihii colaadu ka dhacday oo ay ku sugan yihiin shacabkii weerarka lagu soo qaaday iyo maleeshiyada ilaalinaysay shacabka.